भाउजु भगाएका भन्ने श्रीमानसंग श्रीमतीको हात हालाहाल… पर्यो ठुलै झगडा, ९ बर्षपछि भेट हुदा अन्तत यसरि मिल्यो बिबाद, भाउजुसंग बिहे साँचो कि झुट ? – Complete Nepali News Portal
भाउजु भगाएका भन्ने श्रीमानसंग श्रीमतीको हात हालाहाल… पर्यो ठुलै झगडा, ९ बर्षपछि भेट हुदा अन्तत यसरि मिल्यो बिबाद, भाउजुसंग बिहे साँचो कि झुट ?
सिन्धुली। केहि समय अगाडिको घटनामा हामि सिन्धुली पुगेर सबै कुरा मिलाउने प्रयास गरेका छौ | हामीले केहि समय अगाडी एउटा घटना लिएर आएका थियौ | अहिले २ सन्तान लिएर काठमाडौमा रोजगारीको आशमा बसेकी यि हुन सन्ध्या सुबेदी उर्फ सुशिला बुढाथोकी । जो पछिल्लो समय आफनै श्रीमान र साख्खे दाईकी पूर्ब श्रीमती भाउजुस“ग पिडित छिन या भनौ उनीबाट पिडित छिन । यसर्थमा पिडित छिन कि केही बर्ष अगाडि उनका श्रीमानले उनकी भाउजूलाई भगाएर फरार भए । अहिले धेरै समयपछि उनले थाहा पाईन कि उनीहरु झापामा छन भनेर त्यही कारण अहिले उनी मिडियामा रुदै दुख पोख्दै आएकी छिन । सिधा अर्थमा भन्दा उनका श्रीमानले उनकै भाउजुलाई भगाए ।
हेर्नुस आज हामीले उनको श्रीमान्लाई फेला पारेका छौ यस्तो अवस्थामा, खास भाउजु संग फेला पारेको भन्ने कुरा के होत ?
६० बर्षका श्रीमान र २१ बर्षकी श्रीमती अचानक टिकटकमा भाइरल...
सुन्दा अचम्म लाग्छ, एउटै बोकाको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ, २०...
पोखरामा के भयो यस्तो धर्तीनै फाट्यो ! हेर्दा हेर्दै यस्तो...
हेर्नुस वडा कार्यलयमा कुमार राइको छड्के, बेतिथीबिरुद्ध आक्रोशित हुदै भने...